करिश्माले सँझाइन् नेबिको बिस्कुट « रिपोर्टर्स नेपाल
करिश्माले सँझाइन् नेबिको बिस्कुट
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७७, मंगलबार
काठमाडौं, ४ कात्तिक । नेपालकी सदावहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेपाली चलचित्र जगतकी भेट्रान नायिका हुन् । उनी ९० दशकमा निर्विकल्प अभिनेत्री झै नेपाली चलचित्र उद्योगमा छाएकी थिइन् । उनकै नामले मात्र पनि एक समय फिल्म चल्ने ग¥थ्र्यो । सन्तान फिल्मबाट फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी करिश्मा सबै निर्माता, निर्देशक तथा दर्शकको मनमा बस्न सफल छिन् ।
केही समयसम्म अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएकी करिश्मा हाल भने अध्ययनमा लागेकी छिन् । १४ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा पढाई छाडेकी उनले गएको वर्ष एसइई उत्तिर्ण गरेकी हुन् । हाल कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दैछिन् । उनलाई फिल्म र विज्ञापनमा खेलाउन निर्देशक तथा निर्माताहरुले हानाथाप गर्न पनि पछि पर्दैनथे ।
२०४२ सालतीर करिश्माकोे फोटो सुट भएको थियो । खाजा खाने समयमा निर्माण नियन्त्रक गेहेन्द्र धिमालले करिश्मालाई नेविको बिस्कुट दिएका थिए । उनले चियासँग बिस्कुट खाइरहेको समयमा फोटो ग्राफरले उनलाई पोज दिन लगाए । उनले पनि नेबिको बिस्कुटको साथमा मन्द मुस्कान दिदै पोज दिइन् । तर करिश्माले सम्झनाको लागि खिचेको सम्झेपनि उनको अनुमति बिना पत्रपत्रिकामा विज्ञापन आएको थियो ।
फेसबुकमा निर्देशक सुव्रत आचार्यले नेविको बिस्कुट अहिले पनि पाइन्छ ? भनेर सोधेको एक प्रश्नमा करिश्माले यो बिस्कुटको विज्ञापनमा तस्वीर आउने कारण सामाजिक सञ्जालमार्फत नै खुलाएकी छिन् । विज्ञापन आएपछि मात्र दाईको घरमै गएर पारिश्रमिक माग गरेको बताएकी छिन् ।
‘अपने २’मा देओल परिवारको साथमा कैटरिना र शिल्पा शेट्टी अट्लान् त?
एजेन्सी, १६ मंसिर । देओल परिवारले ‘अपने २’ फिल्म बनाउने घोषणा गरेका छन् । यस
बलिउड नायिका उर्मिला मांतोंडकर शिवसेनामा
एजेन्सी, १६ मंसिर । बलिउड अभिनेत्री उर्मिला मांतोंडकर शिवसेनामा प्रवेश गरेकी छिन् । विगतमा कँग्रेस
अजय देवगनको १६ वर्ष पुरानो फिल्म रिलिज हुँदै
एजेन्सी, १६ मंसिर । कोरोना भाइरसको कारण टिवी र ओटीटी प्लेटफर्ममा कन्टेन्टको माग बढीरहेको छ
फिल्मको याद गर्दै दुःखी भए अमिताभ बच्चन
एजेन्सी, १६ मंसिर । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन तीन दशकभन्दा धेरै समय फिल्म उद्योगमा बिताएका
मलाइका सामु अर्जुन कपुर ‘आसपासमा रहँदा…’
एजेन्सी, १५ मंसिर । मलाइका अरोरा र अर्जुन कपुर बलिउडका सबैभन्दा चर्चित जोडी मध्ये एक
भारती सिंहको पक्षमा कमेडियन कृष्णा अभिषेक
एजेन्सी, १५ मंसिर । लागुऔषध प्रकरणमा मुछिएपछि कमेडियन क्विन भारती सिंह र उनका पति हर्ष
आलियालाई मायाले तानेपछि ३२ करोडमा अपार्टमेन्ट खरिद
एजेन्सी, १५ मंसिर । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टले नयाँ अपार्टमेन्ट खरिद गरेकी छिन् । हाल
लागुऔषध केसपछि शोमा रहलिन् भारती सिंह
एजेन्सी, १४ मंसिर । भारतीय कमेडीयन भारती सिंह हाल मुस्किलमा फसिरहेकी छिन् । सिंह पछिल्लो
वाईफाईको लागि रक्सी देखि यौनसम्म छाड्न तयार
जति पनि प्रविधि बढ्दै जान्छन् त्यति नै तिव्ररुपमा मानिसहरुको जिन्दगी पनि बर्बाद भइरहेको छ ।
८० वर्षीया बडी बिल्डर
अमेरिकाको बाल्टीमोरमा बस्ने एक वृद्धाको जोस देखेर मानिसहरु जीब्रो काट्छन् । उनी ८० वर्षको उमेरमा